Jalapeño Cheddar ဘာဂါ (တူရကီသို့မဟုတ်အမဲသား) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
hash browns နှင့်အတူချက်ပြုတ်ဖို့ကဘာလဲ
အိုးထဲမှာ oreo cheesecake မဖုတ်ပါဘူး
Jalapeño Cheddar ဘာဂါ (တူရကီသို့မဟုတ်အမဲသား)
Jalapeño Cheddar ဘာဂါ (တူရကီသို့မဟုတ်အမဲသား) သည်အလွန်အရသာရှိပြီးလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
နူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသည့်ဘာဂါကိုသယ်ဆောင်ရန်ဤဘာဂါများကိုဒိန်ခဲ၊ မှို၊ ကြက်သွန်၊
ဘာဂါကိုငါချစ်တယ် အမဲသား၊ ကြက်ဆင်၊ ဝက်သား ... ငါအားလုံးကြိုက်တယ်။ ဒိန်ခဲ၊ မှို၊ ကြက်သွန်၊ ငါဘာဂါအပေါ်ကိုချစ်ကြဘူးဘာမျှနီးပါးရှိပါတယ်!
ဤရွေ့ကားအားလုံးအချိန်ငါ့အကြွင်းမဲ့အာဏာအကြိုက်ဆုံးကြက်ဆင်ဘာဂါဖြစ်လိမ့်မယ် !! ဒီဘာဂါတွေကိုအရသာရှိတဲ့jalapeño cheddar ကဖြည့်ဆည်းတဲ့တန်ချိန်ပေါင်းထည့်ပြီးအမဲသားကိုအရည်ရွှမ်းပြီးနူးညံ့စေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာဘာဂါကိုကြက်ဆင်နဲ့လုပ်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းအမဲသားနဲ့လုပ်ထားတယ်၊ သူတို့ကမီးဖိုမှာဖုတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကင်ပေါ်မှာချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်!
သင်နှစ်သက်လျှင်သင်ဝယ်နိုင်သည် ကျပ်ဘာဂါစာနယ်ဇင်း perfectlyုံတူညီတဲ့ကျပ်ဘာဂါရဖို့ ... ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံသူတို့ကိုလက်ဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်သည်ဤအရသာ Patties နှင့်အတူစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
Jalapeno Cheddar ဘာဂါ (တူရကီသို့မဟုတ်အမဲသား)
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ ဘာဂါ Patty စာရေးသူHolly Nilsson ငါဘာဂါကိုချစ်တယ် အမဲသား၊ ကြက်ဆင်၊ ဝက်သား ... ငါအားလုံးကြိုက်တယ်။ ဒိန်ခဲ၊ မှို၊ ကြက်သွန်၊ ငါဘာဂါအပေါ်ကိုချစ်ကြဘူးဘာမျှနီးပါးရှိပါတယ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၂၈ oz ပိန်ကြက်ဆင်သို့မဟုတ်အမဲသား (အပိုပိန်မဟုတ်)
▢နှစ် ဇွန်း ထု minced ကြက်သွန်
▢၄ ဇွန်း ဒိန်ခဲမုန့်
▢နှစ် oz ဖျက်စီးရွတ် cheddar ဒိန်ခဲ
▢၁ လတ်ဆတ်သော jalapeno ငရုတ်ကောင်း အန်စာတုံး (အမွှေးအကြိုင်နည်းနည်းကြိုက်လျှင်မျိုးစေ့များဖယ်ရှားသည်)
▢အလိုရှိသောအဖြစ် Rolls & Toppings
မြင့်မားသောအပေါ် broil မှအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်မီးဖိုမှ Preheat ။
ပန်းကန်လုံးထဲတွင်မုန့်ဒိန်ခဲ၊ cheddar ဒိန်ခဲ၊
အသား၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်နီများကိုပေါင်းစပ်ပါ။ အမဲသားကိုလေးပိုင်းခွဲပါ။ ¼မုန့်ဒိန်ခဲအရောအနှောကိုယူပြီး၎င်းကို pancake ပုံစံအသွင်ပြောင်းလိုက်သည်။ ဒိန်ခဲပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အမဲသားသို့မဟုတ်ကြက်ဆင်ကိုခြုံပါ။ ဘာဂါတစ်ခုစီကိုသံလွင်ဆီအနည်းငယ်ဖြင့်ဆေးကြောပါ။
တစ်ဖက်စီတွင် (၆-၇) မိနစ်ခန့်ကြာအောင်အပူချက်ပြုတ်ထားသောကင်ဘာဂါ (သို့) လုံးဝမချက်ပြုတ်မှီတိုင်အောင်။ (တူရကီနိုင်ငံသည်ပြည်တွင်းအပူချိန် ၁၆၅ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိသင့်ပြီးအမဲသားသည် ၁၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသင့်သည်။ )
ဘာဂါကိုသတ္တုကြွယ်ဝသောသတ္တုတွင်းမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6'' တစ်သတ္တုပါးဖုံးလွှမ်းဒယ်အိုးပေါ်တွင်ထားပါ။ တစ်ဖက်စီတွင် ၅ မိနစ်မှ ၆ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။ (တူရကီနိုင်ငံသည်ပြည်တွင်းအပူချိန် ၁၆၅ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိသင့်ပြီးအမဲသားသည် ၁၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသင့်သည်။ )
လိပ်မပါဘဲတွက်ချက်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်။ ပေးထားသည့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသုံးပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံးjalapeno cheddar ဘာဂါ သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။